पहिलो चरणमा गल्कोटमा २ सय ११ जनाको स्वास्थ्य जोखीम परीक्षण ! | ebaglung.com
२०७४ असार २७, मंगलवार ०८:१४	Top News, थप समाचार 426 पटक हेरिएको !
घनश्याम गौतम, गल्कोट २०७४ असार २७ । गल्कोटमा नगरपालिकाका बिभिन्न बडाहरुमा पहिलो चरणको स्बास्थ्य जोखीम परीक्षण सम्पन्न भएको छ । असार २१ गते देखी सुरु भएको स्बास्थ्य जोखिम परिक्षण हिँजो सोमबार सम्पन्न भएको हो । यो परिक्षण संगै पहिलो चरणको परिक्षण सम्पन्न भएको दर्ता सहयोगी देबेन्द्रसिहँ बस्नेतले जनाकारि दिनुभयो । गल्कोटका बाँकी क्षेत्र रिघा, पाण्डबखानी तथा तारा गाँउपालिकाका साबिकका सम्पुर्ण गाबिसका बिमित सदस्यलाई दोश्रो चरणमा स्बास्थ्य जोखीम परिक्षण गरिने जनाइएको छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिकास समिति अन्तर्गत रहेर स्वास्थ्य बिमा गरेका ४० बर्ष भन्दा माथिका बिमित सदस्यहरुलाई कम्तिमा बर्षको एक पटक स्वास्थ्य जोखिम परिक्षण कार्यक्रम अन्तरगत गल्कोटका साबिकका हटिया, हरिचौर, नरेठाँटी, ,दुदिलाभाटी, मल्म र काडेबासमा जोखिम परिक्षण सम्पन्न भएको हो । साबिकका ६ गाबिसबाट ४० बर्ष माथीका बिमा गरेका सदस्यहरु कुल ३ सय ३९ मध्ये २ सय ११ जनाको स्वास्थ्य जोखीम परिक्षण सम्पन्न भएको बिमा समितीले जनाएको छ ।
जोखिम परिक्षणमा ब्लड पे्रसर, व्लड सुगर, युरिन प्रेटिन लगायतका ल्याब टेस्ट गरिएको थियो । स्बास्थ्य जोखीम परिक्षण अन्तरगत सोमबार गल्कोट नगरपालिकाका ७ र ९ वडाको मल्म भित्रका ३८ जना मध्ये ३१ जनाको स्वास्थ्य परिक्षण सम्पन्न भएको छ ।
परिक्षणमा १ जनालाई व्लड सुगर १ जनालाई युरिन प्रोटिन देखिएको छ । रोग देखा पर्ने बिरामीहरु लाई थप उपचारका लागि गल्कोट प्राथमिक स्बास्थ्य केन्द्रमा पठाईएको ल्याब असिस्टेन्ट अर्जुन कुमार महतोले जानकारी दिए ।
यस अघि गल्कोट नगरपालिकाको १ नं वडा दुदिलाभाटी भित्रका ६० जना मध्ये २७ जनाको स्वास्थ्य जोखीम परिक्षणमा ३ जनालाई युरिन प्रोटिन, वाड नं २ नरेठाटी भित्रका २६ जना मध्ये २० जनाकोे स्वास्थ्य जोखीम परिक्षणमा १ जनालाई सुगर र १ जनालाई युरिन प्रोटिन, बाड नं ३ र ४ हटिया भित्रका ५८ जना मध्ये ५२ जनाको स्वास्थ्य परिक्षणमा ४ जनालाई व्लड सुगर, वाड नं ५र ६ भित्रका १२४ जना मध्ये ५८ जनाको स्वास्थ्य जोखीम परिक्षणमा २ जनालाई सुगर र २ जनालाई प्रोटिन, वाड नं ८ काडेबास भित्रका ३३ जना मध्ये २३ जनाको स्वास्थ्य जोखीम परिक्षण गरिएकोमा १ जनालाई व्लड सुगर देखीएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिकास समितिले जनाएको छ ।
बिरामी बिमति सदस्यलाई गल्कोट प्राथमिक स्बास्थ्य केन्द्र र धौलागीरी अञ्चल अस्पतालमा उपचारको लागी सिफारिस गरिएको छ ।